ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ဟောစိလို ဟောစိလို
Don't you have any other story?
please, control your mind before you share your idea to publish.
ဟုတ်လယ် ကိုပေါ ဝ,အားကီး စိတ်ဆိုးလယ်။ ဂျပန် အားကီးဒုက္ခပေးလယ်။ ဂျပန်ကို စေအောင်စတ်ရမယ်။ ဂျပန်ကို စတ်ပီး ပေါက်စီလုပ်ခွီးကျွီးပစ်မယ်။
Right, especially 3rd group should not do "Halsilo Halsilo" as to be prolong power in hand of SPDC.
I am just one of your readers ... but just nobody ...not even involved in Political movements before. Justamyanmar citizen who like to read your posts...
Infact, I also do not favour of our Election. and how it works !!! however, partly I still support for those small parties no matter what !! why ? Well...letting rather than the entire USDP dominate all the seats, atleast I feel that we have somebody(may be just one or two) who will voice out and let the public knows.. .may be who will tell something which should be / should not be ...even thought they have no power to implement...
X rated post. It should have warning sign before reading.
ဟောစီလို..ဟောစီလိုတွေလဲ ပြည်ပမှာ အများကြီး.
ကိုပေါ ခင်ဗျားအဲဒီလို ခပ်ရိုင်းရိုင်းလေး များများရေးဗျ ဒီမိုကရေစီမြန်မြန်ရအောင်
Ko Porn ရဲ့ ချုံပုတ်လို့ အမည်ပြောင်းရင် ကောင်းမယ်ဗျို. ၊ ခင်ဗျား profile က ဓါတ်ပုံကလည်း ဦးကျောက်လုံးကြီးနဲ.တူတယ်ဗျ ၊ ခန်.ချောကြီး ...
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ ဟောစိလို ဟောစိလိုလုပ်တာနဲ့ စာနယ်ဇင်း သမားတွေ ဟောစိလို ဟောစိလို လုပ်တဲ့ အပေါ် ဆြာပေါရဲ့ သဘောထား ကွာပုံလေးကို တဆိတ် ရှင်းပြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
မကွာဟ ပါဘူးဗျာ။ ဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ်ကို အသေအချာ ပြန်ကြည့်ပါဦး။ ဝိုင်းစုကိစ္စတုန်းကတော့ ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံများဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် ကြောက်လို့ ထွက်ပြေးလာပြီးမှ ပြည်တွင်းက သရုပ်ဆောင်အချို့ ကြောက်လို့ လုပ်ရတဲ့ကိစ္စကို ဆန္ဒပြကြတဲ့အပေါ် ရှေ့နောက်မညီလို့ ဝေဖန်တာပါ။ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မှန်တယ်လို့ ကျနော် ချီးကျူးမထားပါဘူး။ ဆောင်းပါးထဲမှာ ရှုတ်ချတောင် ရှုတ်ချထားပါသေးတယ်။ ဆိုလိုတာက နအဖဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ပြည်ပကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ လူတွေမှာ အကြောက်တရားနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြည်တွင်းကလူထက် တမူးပိုရှူဖို့ Morally တဆင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေက ဝိုင်းစုကို ဆန္ဒပြရင် ဘာမှ ပြောစရာအကြောင်း မရှိဘူးလို့ အဲဒီဆောင်းပါးမှာ အတိအလင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ဆရာများနဲ့ စာနယ်ဇင်းဆရာတွေကတော့ ကြောက်လို့ ငြိမ်ခံနေတဲ့သဘောထက် အလိုတူ အလိုပါ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဝင်ပါတာကြောင့် (ဝင်မပြိုင်လည်း ရနေတာပဲ မဟုတ်လား) ဟောစိလို ဟောစိလို လုပ်နေတယ်လို့ ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရှင်းပြီ ထင်ပါတယ်။
nga paw, can u give an alternative solution? if not, u should shut your f***** mouth shut...
ကိုပေါ ပြောချင်တဲ့ စကားကို ဥပမာ နဲ့ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ဖေါ်ပြလိုက်တာ ကို ပေါရဲ့ စွမ်းရည်ပဲ၊ ဘာပဲ ပြောပြော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ သေချာပေါက်ဖြစ်တော့မှပြဲ၊ မဲပေးမဲ့သူတွေကလဲ အသင့်ရှိနေကြပါပြီ၊ မဲပေးနိုင်တာ၂၉ သန်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ၂၈ သန်းကတော့ သေချာပေါက် လာပေးမှာပဲ၊ ကျန်တဲ့ ၁ သန်းကတော့ ခရီးလွန်နေတဲ့သူတွေ ၊ မအားလပ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်လောက်တယ်။ အစိုးရ ရဲ့ လမ်းစဉ် (ရ) ရပ်ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့ စွမ်းအား မရှိတာ ကတော့ သေချာတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှေ့ရေးဟာ ပိုကောင်း လာမှာ သေချာပါတယ်၊
ကျော်ခွ ၀င်လာရတော မှတ်ချက်ပေးရတာ အဆင်မပြေဘူး၊ အပေါ်က မှတ်ချက်ပေးတာ ကျွန်တော် မောင်လမ်းသစ်ပါ။ နောင် အစိုးရ တက်ရင် ဘလော့တွေ ဖွင့်ပေးရင် ကောင်းမယ်
ကိုပေါခင်ဗျာ face book မှာ ပြန် share ချင်လို့ ယူသွားပါတယ် ...
ဟုတ်ကဲ့ ယူပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုပေါထံ မရောက်တာ ကြာပါပြီ။ ဒီ စါစု လေးဖတ်ပြီး အရမ်းသဘောကျ လို့ အသံထွက်ပြီး ရီမိပါတယ်။ ဒီလို မရီ ဖြစ်တာ ကြာလှပါပြီ။ ကိုပေါ ရဲ့ ဥပမာ သိတ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကွက်တိပဲ။ အဲဒီ လို ဟောစိလို လူတွေ ပြည်တွင်းပြည်ပ မှာ ရှိပါဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ ဦးခင်မောင်ဆွေနဲ့ ဦးသုဝေတို့ ကို သနားလို့ မဆုံးဘူး။ တတုံးစားလည်း မမှတ် နှစ်တုံး စားလည်း မမှတ်ပဲကိုး။